Voice n Video Chat in gmail — MYSTERY ZILLION
Voice n Video Chat in gmail
gmail ဖြင့် Voice n Video Chat သုံးချင်ကြပါသလားခင်ဗျာ။ Google က ဒီ features တွေကို Launch လုပ် လိုက်ပါပြီ။ မနေ့ကလေးတင် Launch လုပ်လိုက်တာပါ။ အသစ်စက်စက်လေးပါ။
There are still some things that just can't be expressed inachat message. That's why today we're launching voice and video chat -- right inside Gmail လို့ official gmail blog က ဆိုထားပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို ဒီမှာ ကြည့်ပါ။
Voice n Video Chat သုံးမယ်ဆိုရင် လုပ်ရမှာက တစ်ခုထဲပါ။ http://mail.google.com/videochat ကနေပြီးတော့ Plungin လေးတစ်ခု download လုပ်ပြီး အင်စတောရုံပါပဲ။ Webcam လေး ရှိဖို့တော့ လိုပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ gamil user ပေါင်း အများကြီးရှိပါတယ်။ eamil ဆိုရင် gmail လို့ပဲထင်နေတဲ့အထိ မြန်မာပြည်မှာ gamil ကပေါက်တာပါ။ အခုတော့ အသံနဲ့အရုပ်ပါ ပြောလို့ရပြီဆိုတော့ အရမ်းကို အဆင်ပြေလွန်းသွားပါပြီ။
နဂိုက VZO နဲ့ video chat နေရသူတွေ အခုတော့ အဆင်ပြေပါပြီ။ အဝေးရောက် မိသားစုဝင်အချင်းချင်းလည်း ပိုမိုနီးကပ်လာပြီပေါ့။ QQ လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ကိုကိုမမလေးများလည်း အစွမ်းကုန် Q နိုင်ပါပြီ။
skype တို့ vzo တို့လို VOIP တွေတော့ ထိုင်ခုံက နဲ့နဲ့လာပါပြီ။ Gaintကြီး Google ကတော့ တစ်ခုပြီး တစ်ခု Launch နေတော့တာပဲ။
P.S ဒီ voice n video chat က gamil အထဲမှာသာ ရတာပါ။ gtalk မှာ မရပါ။ နောက်တစ်ခုကတော့ ဒါသည် Windows နဲ့ Mac နှစ်ခုမှာပဲ ရပါတယ်တဲ့။ Linux အတွက်တော့ Plugin မရသေးပါတဲ့ ခင်ဗျာ။ ကဲ ကျွန်တော်တို့လို Linux user တွေတော့ ရင်ကွဲပါပြီ။ Google က နည်းနည်းတော့ များနေပါပြီ။ gtalk လည်း Linux version မလာသေး။ အခု ဒီ Voice n Video chat လည်း Linux Version မလာသေးနဲ့။
အသစ်ပဲဗျ။ information share ပေးတာကျေးဇူးပါ။ :77:
Xie' Xie' Ni
Cheers! i so happy to that news:)):)):))
Thank you very much for your information.:65::65::65:
ဘာလဲ Q ရတာပိုအဆင်ပြေပြီဆိုပြီး kzthet က ပျော်နေတာလား ?
ဟီးဟီး ... စတာနော် ... ချိတ်ချိုးရ၀ူးနော် ...
ဒီသတင်းရရခြင်းပဲ ကိုယ်တို့က Install လုပ်ချလိုက်ပြီ ... လက်သွက်တာ ဟဲဟဲ :P
စမ်းတော့မစမ်းကြည့်ရသေးဘူး ... အသုံးချပြီးသူများရှိရင် ညွှန်ကြားပေးကြပါဦးနော် ဦးဦး ဒေါ်ဒေါ်တို့ ... အဲ အဲ ယောင်တွားလို့
ကိုကို မမ မောင်လေး ညီမလေးတို့ရေ ...
ဟုတ်ကဲ ့ဗျာ. ကျနော်လည်း ဒီနေ ့သိသိချင်း စမ်းကြည့်ပြီးသွားပြီ...အားလုံးအဆင်ပြေတယ်...IE မှာရော frefox မှာရော ရတယ်....voice တော့နညး်းနည်းdealy ဖြစ်တယ်...google ကတော့ကတယ့်ကိုအံံ့မခန်းပါပဲဗျာ.....ကျေးဇူးတွေတော်တော်များနေပြီ.....ဒါနဲ့opengun ရဲ ့signature လေးကိုကြိုက်တယ်ဗျာ...ပျော်ရွှင်စွာ နေတတ်ခြင်း၊ ဘဝကို ရယ်မောတတ်ခြင်း၊ လွန်ခဲ့သော ကာလများကို များစွာ သတိရဖြစ်ခြင်း ။အဲဒါလေးကိုကျနော်ဂျီတော ့မှာတင်ချင်တယ်ဗျာ...ခွင့်ပြုပါလားဟင်
ကျွန်မ စမ်းကြည်.တာမရဘူးဖြစ်နေတယ်။Install တော့ လုပ်ပြီးပြီ။ gmail ထဲကနေဘယ်လို၀င် ရသလဲ။ လုပ်နည်းလေးပြောပေးပါအုံး။ကျေးဇူးပါ။
ကိုယ့်ပုံပဲကိုမြင်ရတယ်...ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲသိချင်ပါတယ်...တက်သွားရင်လဲ ပာိုဘက်ကAvatar ပဲမြင်ရတယ်...လူကိုမမြင်ရဘူး...
ဒီလိုinformationလေးတွေsendပေးတာကျေးဇူးတော့တင်ပါတယ်.........ဒါပင်မဲ့ downloadလုပ်ရတာကြာတယ်.....ကြာလို့ .... refreshချလိုက်တာတာတစ်ခါတည်းဟန်းသွားရောသိရင်တော့ပြောပြကြပါ.. (:((:((:((:((:((:14:
အဲလိုပြောဖို့အတွက် ကိုယ်နဲ့ပြောမယ် ့လူရဲ ့ဖက်မှာလည်း အဲဒီ plugin လေးတပ်ထားရမယ်လေ...ပြီးတော ့ဟိုဖကက်လည်း webcam ရှိမှ သူ့ကိုကြည်လို ့ရမှာပေါ့...webcam မရှိလည်း voice chat ပဲပြောမယ်ဆိုပြောလို့ရပါတယ်...သူ ့ဖက်က avator လေးပဲပေါ်လာလိမ့်မယ်....တကယ်လို့plugin တပ်ပြီးလို့မှ camera ပုံလေးမပေါ်သေးဘူးဆိုရင် စက်ကို restart ပြန်ချလိုက်ပါ....အဆင်ပြေသွားမှာပါ...
not easily download in google site
u can download here for gmail voice and video chat
installing that file and login to ur gmail
click any chat fri and
click option base of chat window
ur can voice chat or video chat click here
:65: all the people in the world like the having funs ..............and i wish MZ members to have many funs ,,,,,,,,,,,,,,,,, !!! and you want to have fun so follow to:http://www.games2win.com :65:
ဒါနဲ့opengun ရဲ ့signature လေးကိုကြိုက်တယ်ဗျာ...ပျော်ရွှင်စွာ နေတတ်ခြင်း၊ ဘဝကို ရယ်မောတတ်ခြင်း၊ လွန်ခဲ့သော ကာလများကို များစွာ သတိရဖြစ်ခြင်း ။အဲဒါလေးကိုကျနော်ဂျီတော ့မှာတင်ချင်တယ်ဗျာ...ခွင့်ပြုပါလားဟင်
ဟုတ်ကဲ့။ ရပါတယ်ဗျာ။ တင်ပါ။ ဂျီတော့မှာတင်နိုင်ပါတယ်ဗျာ။
ကြည့်ရတာ ခံစားချက်တစ်ခုခု ရှိနေပုံရတယ်။ :d
မနေ့က connection စုတ်ပြတ်နေတာနဲ့ စိတ်ညစ်ပြီး online မသုံးပဲ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ game သွားဆော့နေလိုက်တာ ဒီသတင်းကို အသိနောက်ကျသွားတယ်ဗျာ။ နို့မဟုတ်ရင် ဟီးဟီး
အားလုံးပဲခင်ဗျားယခုဆိုရင် Gmail ထဲမှ Video Chatting ပြောလို့ရနေပါပြီ။
ဒါပေမဲ့တချို့တချို့သော Error များကြောင့် User များအသုံးပြုရာတွင်အဆင်မပြေမှုများရှိနေသေးသည်။
ယခု ဒီ Thread ထဲတွင် ကျွန်တော်သိသမျှ Error များကိုဖော်ပြသွားပါမည်။
ဒါလေးတွေကို Download လုပ်ပြီး Install လုပ်ပေးရပါမယ်။
1. http://ifile.it/bkugpem ဒါက Google Plug-in ပါ။
2. http://ifile.it/s7efpxy ဒါက Flash Player ပါ။
1.အသုံးပြုသူ၂ယောတ်စလုံး Google Plugin နှင့် Flash Player ကို Install လုပ်ထားရပါမယ်။
2.Webcam ၂ ဖက်စလုံးမှာ ရှိရပါမယ်။ Webcam မှာပါလာတဲ့ Software ကိုမ Run ထားရပါဘူး။
3.မည်သည့် Browser တွင်မဆိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
4.တယောက်ယောက်ဖက်က Webcam မရှိပါကမရပါ။ Google Plugin နှင့် Flash Player ကို Install မလုပ်ထားပါကမရပါ။ Avatar ပဲပေါ်ပါတယ်။
5.Video Chatting က Google Mail ထဲမှာပဲအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
သိချင်တာရှိရရင် Post တင်ကျပါခင်ဗျာ။
Error များကို Post တင်ပေးကျပါခင်ဗျာ။
ဒီလို အလကားနဲ့ ကောင်းကောင်းလေးတွေ တင်ပေးထားတဲ့ အပေါ်ကဘော်ဘော်တို့ကို ကျေးဇူး ဆယ်ပိတ်သာလောက်တင်တယ်နော်။ နည်းတယ်မထင်နဲ့အုံး။ နိုင်အောင်အရင်သယ်အုံးနော်။ နောက်ရှိသေးရင်လဲ အခုလိုပဲ တင်ပေးအုံးနော်။
nandy wrote: »
အဲဒါ က fri computer မှာ Vzo run နေလို ့ပါ....
Vzo chat ကို exit လုပ်ပေးလိုက်ပါ ...ဒါဆို အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်....
အဓိက ကတော့နှစ်ဖက်စလုံးမှာ လိုအပ်တာတွေကို Install လုပ်ထားရပါမယ်။ Google Plugin နှင့် Flash Player ကို Install မလုပ်ထားပါကမရပါ။
ပြီးရင် Webcam ကိုမည်သည့် Application နှင့် မှ Run မထားရပါဘူး။
Google mail မှ webcam အား Automatic, Run ပေးပါလိမ့်မယ်။ အဆင်သင့်သုံးရုံပါပဲ။
ကျွန်တော်ကတော့စမ်းလို့ရပြီမို့အားလုံးကို Share တာပါ။
:101: Errorတွေကို Post တင်ကြပါနော်။ :101:
ဂျီမေဗီဒီယို အင်စတော လုပ်လိုမရဘူးဖြစ် နေ လို့ပါ ၊
link လုပ်လိုက်ရင် access denied ဖြစ်သွား တယ်။
GoogleVoiceAndVideoSetup ကို ဒီမှာ ဒေါင်းကြည့်ပါလား။
ဘယ် လိိုလုပ်ရမလဲ ဆိုတာသိရင် ပြော ပါနော်။
ကျွှန်တော် တော်တော် ခက်ခဲနေလို့ပါ။
ဒီ Thread ရှေ့ ပိုင်းမှာ ရေးထားပါတယ်။ ကျနော် မသုံးဖူးပါဘူး။ Chat စရာ ကောင်မလေးမရှိလို့ပါ။(အရေးထဲ ကြေငြာဝင်နေသေးတယ်။):D:D:D
၀က်ဘ်ကင်မရာ ကိုဘယ်applicaion နဲ့ မှ မrun ရဘူးဆိုတာ ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဟင် ရှင်းပြပေးပါအုံးနော်....vzochat မှာ အရင်တုန်းကသုံးလို့ ရအောင်ဆိုပြီး camera install လုပ်ထားလို့ပါ.။
htetsuaung wrote: »
Webcam Driver install ထားတာကတော့ လုပ်ရမယ်၊ အခြားသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ application တွေအတွက်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် vzochat application လိုမျိုးကျတော့ သူတို့ရဲ့ run time မှာ webcam ပါတစ်ခါတည်း open ထားတယ်။ webcam active ဖြစ်နေတယ်ပေါ့။ အဲဒီ vzochat program ကို exit လုပ်လိုက်မှ webcam ရော ပိတ်သွားတာ။ ဆိုလိုတာက gmail video chat အသုံးပြုဖို့အတွက် webcam က တစ်ခြား application တွေမှာ in use ဖြစ်မနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Skype video သုံးဖို့အတွက်လဲ vzochat program ကို exit လုပ်ထားရပါတယ်။
ကင်မရာကိုဘယ်application နဲ့မှမ run ရဘူးဆိုတာက vzochat,skype တို့ကို videochat
ဖွင့်ပြီးချက်နေတာတို့ video ရိုက်နေတာတို့မလုပ်ဖို့ပြောထားတာပါ..ကင်မရာကိုဘာမှမသုံးဘဲအအား
ပေးထားပြီးမှ gmail video chat ကိုအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်..
firefox မှာ မရလို့ ပါ ကူ ညီပါအုံး
G-mail ၏ service အသစ်ဖြစ်သော Gmail Voice and Video Chat ကိုသုံးဖို့ browser မှာ Plug-in တစ်ခုအင်စတောလုပ်ပေးရပါမယ်။ အဲဒီ plug-in ကို www.gmail.com/videochat မှာဒေါင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒေါင်းပြီးရင် run ပေးရပါမယ်။ Run ပြီးရင် browser ဖွင့်ပြီး gmail ကို sign in လုပ်ပါ။ Firefox browser ဆိုရင် gmail chat နေရာမှာရှိတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ Nick နေရာမှာ camera ပုံ ပေါ်နေပါမယ်။ IE မှာဆိုရင်တော့ နစ်ကိုနှိပ်ပြီး chat ၀င်းဒိုးပေါ်လာရင် Video and more ကိုနှိပ်ပြီး add voice/video chat ကိုဆက်နှိပ်ရပါမယ်။ ပြီးရင် click here ကိုနှိပ်ပြီး Flash Plug-in တစ်ခုကို install လုပ်ပေးရပါမယ်။ Video Plug-In run ပြီးသောသူများကတော့ icon အ၀ိုင်းနေရာမှာ video ပုံ အဖြစ်မြင်ရမှာပါ။ ပြီးရင် G-mail chat box မှာ start video chat ကိုနှိပ်ရင် တဖက်လူရဲ့ gmail မှာ gtalk ရဲ့ မငညါအသညန အတိုင်း သွားမည်မှာပါ။ Gmail voice and chat အသံမှာ ဂျီတော့ အသံ အတိုင်း ကြည်ပြီး web cam driver run ပြီးပါက VZO ကဲ့သို့ setting ထဲ ၀င်ပြောင်းစရာမလိုဘဲ အလိုလို သိလို့ webcam တပ်ပြီး တန်းသုံးနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ စမ်းကြည့်ကြပါ။ အဆင်မပြေရင် ပြန်ပြောကြပါ။ အခုတော့ ကျွန်တော် စမ်းဖို့ က ကွန်နက်ရှင်မကောင်းလို့ အဆင်မပြေလို့ ပါ။ ပြီးတော့ ဒီ service ကို gtalk မှာမသုံးနိုင်သေးဘူူးလို့ ဆိုပါတယ်။
REF: Internet Journal နို၀င်ဘာလ (27)ရက် ထုတ် က မှီငြမ်းပြီးတင်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အဆင်မပြေပါက အားမနာတမ်း ေ၀ဖန်နိုင်ပါသည်။